Warbixin: Manchester United oo wado qorshe ay dib ugu soo ceshaneysa ciyaaryahankeedii hore ee Luis Nani | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Warbixin: Manchester United oo wado qorshe ay dib ugu soo ceshaneysa ciyaaryahankeedii hore ee Luis Nani
Warbixin: Manchester United oo wado qorshe ay dib ugu soo ceshaneysa ciyaaryahankeedii hore ee Luis Nani
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 9-06-16 1:06 PM Manchester United aya lasoo tabinayaa iney daraasad ku sameyneyso sidii ay markale ula soo saxiixan laheyd xidiga garabka ugu ciyaara xulka dalka Portugal Luis Nani.
29 Sano jirkan ayaa 7 sano kamid ah noloshiisa kusoo qarash gareeyey kooxda Manchester isaga oo kusoo biiray kooxda Red Devils ka 2007 dii waxa uuna ka hayaamay 2014 kii kolkaas oo uu qaab amaah ah ugu biiray kooxda Sporting Lisbon kahor inta uusan u dhaqaaqin horyaalka Turkey 2015 kii.
Waxa uu xagaagii aynu kasoo gudubnay uu si rasmi ah ugu biiray kooxda Fenerbahce, balse wargeyska ugu carabka dheer dalka Turkey ga ayaa sheegayo in xidigan dalab uu ka helayo macalinka cusub ee kooxda Man United Jose Mourinho kaas oo taageere u ah ciyaaryahanka ay isku dalka kasoo jeedaan.
Warbixinada ayaa intaas ku darayo in Nani uu ugu fadhiisan doono Man United aduun dhan 6.3 Milyan oo ginni kaas oo lagu baabi’in karo qandaraaska uu kula jiro kooxda reer Turkey ee Fenerbahce, United ayaa dooneysa iney ku daboosha booska uu flop ka ku noqday Memphis Depay.
ugu dambeyn waxaa xusid mudan in Luis Nani uu kooxda Man United u dhaliyey 40 gool 229 jeer ee uu kasoo muuqday kooxda Man United tan iyo 2007 dii xilligaas oo kasoo hayaamay kooxda reer Portugal ee Sporting Lisbon.